Maalinta: Febraayo 2, 2020
Warbixinta Hantidhawrka Joogtada ee Maxakamadda 2018 waa mid ka mid ah mabaadiida aasaasiga ah ee Sharciga Iibsiga Dadweynaha ee mashruuca trambus-ka, kaasoo aan ka dhicin ajendaha ofanlıurfa. waxay shaaca ka qaadday inay ku xad gudubtay mabaadii'da daahfurnaanta, tartanka, ula dhaqanka ula dhaqanka, sirta, iyo adeegsiga kheyraadka leh [More ...]
Wasiirka Turhan İyidere wuxuu baarayaa shaqooyinka wadooyinka 'İkizdere'
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, oo baarey Wadada Iyidere-Ikizdere, ayaa kula kulmay ganacsatada iyo shacabka degmada Ikizdere ka dib kulanka ka dhacay goobta dhismaha wadada la xiriira howlaha socda. Wasiirka oo warbixin ka siiyay suxufiyiinta halkan [More ...]
Goorma ayaa garoonka Rize Artvin la furi doonaa?
Turhan, oo baaritaano ka sameeyay dhismaha garoonka diyaaradaha ee Rize-Artvin, wuxuu sheegay inay fursad u heleen inay arkaan mashaariicda magaalada ka socda booqashadooda inta lagu jiro maalinta. Iyadoo la siinayo macluumaad ku saabsan shaqada wadada weyn ee Iyidere-Ikizdere, ayuu yiri Turhan, [More ...]
Badhanka waxaa lagu cadaadiyey Bursa Waqooyiga Peripheral Highway!
Diyaargarowga isbedelka wadada ee qeyb ka mid ah mashruuca wadada isku xirta Istanbul iyo Bursa-İzmir, oo ajandaha waxaa keenay qareenka Nurhayat Altaca Kayışoğlu, xubin ka tirsan baarlamaanka barlamaanka CHP Bursa iyo xafiiska baarlamaanka. [More ...]
İmamoğlu, Pendik Kaynarca Tuzla mitirka Dhismaha Berrito ee Pendik
Ekrem İmamoğlu wuxuu u imanayaa goobta dhismaha Pendik ee furitaanka khadka metro ee Pendik Kaynarca Tuzla. Magacyo badan oo muhiim ah ayaa ka soo qeyb geli doona xafladda galabta dhismooyinka tareenka dhulka hoostiisa ku dhammaan doona 2022. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay kordhisay tirada tareenada ee Khadka Khadka tareenka ee Kadıköy Moda Tram. Inta lagu gudajiro saacadaha mashquulka badan ee maalinta, rakaabka qaadaya awoodda xariiqda, oo loo adeegsaday 3 gaari, ayaa kordhay ku dhawaad ​​30 boqolkiiba. Inta u dhaxaysa Kadıköy Moda [More ...]
Dhul-gariir ka dhaca Wadada Samsun Ordu
Ka dib markii dhul-gariirku ka dhacay goobta Taşıbaşı Mahallesi ee ku taal wadada xeebta Badda Madoow, Dawladda Hoose ee Magaaladu waxay bilaabatay inay si hufan uga shaqeyso furitaanka wadada sida ugu dhaqsaha badan iyagoo fulinaya halgan wax ku ool ah daqiiqadihii ugu horreeyay ee shilka. Kooxo, dhul iyo [More ...]
Pendik Kaynarca Tuzla Metro Line Joojinta
Jadwalka metro Pendik Kaynarca Tuzla wuxuu joogsadaa websaydhka rasmiga ah ee labada magaalo ee Istanbul iyo IMM. Joojinta khadka metrooga, oo ay si wada jir ah u dhisi doonaan Alsim Alarko iyo Cengiz, ayaa la go'aaminayaa. [More ...]
Maanta taariikhda: 2 Febraayo 1922 26 ee Ankara bishii December
Maanta oo ah Taariikhda 2 Febraayo 1922 26 Wakiilka Ganacsiga Mareykanka Gillespie, oo Ankara yimid bishii Diseembar, wuxuu warqad u qoray Waaxda Ganacsiga Mareykanka warbixin: [More ...]